डा.भीम रावल « Nagarik Khabar
Tag: डा.भीम रावल
देउवालाई रावलको जबाफ : झुटो बोल्ने प्रधानमन्त्रीको ‘दिमाग खुस्केर’ होस हराएको हुनुपर्छ !
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिको नेकपा (एमाले)का नेता डा.भीम रावलले जबाफ दिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रावल रक्षामन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमसीसी संसद्मा पेस
भीम रावलको स्पष्टोक्ति : एमसीसी सम्झौता म रक्षामन्त्री हुँदा गरिएको होइन
काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनिय च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आफू रक्षामन्त्री हुँदा स्वीकृत गरिएको आरोप लागेपछि नेकपा (एमाले)का नेता डा.भीम रावलले खण्डन गरेका छन् । एक सञ्चार माध्यमले रावल रक्षामन्त्री
बाबुरामलाई भीम रावलको जबाफ : पिएचडी नक्कली सीमापारि हुन्छ, त्रिविमा हुन्न
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का नेता डा.भीम रावलले आफ्नो पिएचडी नक्कली नभएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको नै पिएचडी नक्कली हुन सक्ने जबाफ दिएका छन् । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन
एमसीसीलाई लिएर दुई ‘डाक्टर’ नेताको जुवारी : भट्टराईले भने–रावलको पिएचडी नक्कली त होइन ?
काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई लिएर दुई ‘डाक्टर’ नेताबीच सामाजिक सञ्जालमा जुवारी चलेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई
प्रधानमन्त्री देउवालाई रावलले भने– विवेकको आँखा खोलेर हेर्नु, एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती हो (भिडियाे)
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का नेता डा.भीम रावलले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने षड्यन्त्रमा पाँच दलीय गठबन्धन लागेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब
ललिता निवास प्रकरणमा भीम रावलको आशंका : मुद्दा फासफुस गर्ने चाल त होइन ?
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का नेता डा.भीम रावलले काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धानप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । प्रहरी अनुसन्धान पूरा गरिसकेर सरकारी वकिललाई बुझाएको मुद्दा प्रहरीलाई
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का नेता डा.भीम रावलले नेकपा (माओवादी केन्द्र)को अधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियाले जनवादलाई ‘म हो वाद’ मा झारेको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै डा.रावलले
भीम रावलले भने– सोध्दै नसोधी कुनै पदको टीका लगाइदिनु आपत्तिजनक
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का नेता डा.भीम रावलले आफूलाई नसोधी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को सदस्य बनाएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले आफूलाई सोध्दै नसोधी कुनै पदको टीका लगाइदिनु आपत्तिजनक
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का निवर्तमान उपाध्यक्ष डा.भीम रावललाई केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्‍मा सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ । सो पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार भएका डा.रावल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग